Ukuziphatha Okungekho Thixo: Ukuba Ulungile Ngaphandle KoThixo okanye Inkolo
Ngaba kunokukho ukuziphatha okungamhloneli uThixo? Ngaba sinokuphakamisa ukuphakama kokuziphatha okungenakuhlonela uThixo ngaphezu kwendabuko, inkolo kunye nokuziphatha ngokwenkolo ? Ewe, ndicinga ukuba oku kwenzeka. Ngelishwa, bambalwa abantu bavuma nokuba khona kwezinto zokuziphatha ezingamhloneli uThixo, kungabi nantoni kubaluleka. Xa abantu bethetha ngeempawu zokuziphatha, bahlala becinga ukuba kufuneka bathethe ngokuziphatha ngokwenkolo kunye neenkolo zonqulo.
Kungenzeka ukuba ukuziphatha okungenakuhlonela uThixo, ukuziphatha kakubi .
Ngaba Inkolo Yenza Imilinganiselo?
Esinye isicatshulwa esicacileyo kodwa esinyanisekileyo kukuba inkolo kunye ne-inism iyimfuneko yokuziphatha-ukuba ngaphandle kokukholelwa kunkulunkulu ongenanto kwaye ingenayo inkolo ethile, akunakwenzeka ukuziphatha. Ukuba abantu abangahloneliyo uThixo bayayilandela imithetho yokuziphatha, kuba "babiwe" benqulo ngaphandle kokwamkela isiseko sabo senkolo. Kuyacaca ke, ukuba iinkolo zonqulo zenza izenzo zokuziphatha okubi; akukho buhlobo olwaziwa phakathi kokunqula okanye ukuba yinkcubeko kunye nokuziphatha ngokuziphatha.
Ngaba Ukuziphatha Okuthini Kukho Unqulo?
Okunye ukuthuka kukuba ukucinga ukuba xa umntu enza into ethile yokuziphatha okanye yokupha, oko kuyimpawu yokuba kufuneka babe ngumntu onqulo. Ngamaxesha amaninzi ukuziphatha komntu kuboniswe ngokubonga ngokuthi "uyabulela" oku kuquka into efana neyo "ngumKristu onguwe." Kunjengokuba "umKristu" yileyibhile evamile ngokuba ngumntu ohloniphekileyo-okubonisa ukuba ukuziphatha okunjalo ayikho ngaphandle kobuKristu.
Ukuziphatha njengomyalelo kaThixo:
Inkolo , ukuziphatha kobukhohlakeleyo isekelwe ngokungenakuqinisekiswa, ubuncinane kwinqanaba, kwinguqulelo "yomyalelo kaThixo" inkolelo. Into enokuziphatha xa uThixo uyayilawula; ukuziphatha kakubi xa uThixo enqabela. UThixo ungumlobi wokuziphatha, kwaye iimilinganiselo zokuziphatha azikwazi ukuba khona ngaphandle koThixo. Kungoko kutheni ukufunyanwa kukaThixo kuyimfuneko ukuziphatha ngokwenene; ukwamkela le ngqungquthela, nangona kunjalo, mhlawumbe iyakuvimbela ukuziphatha kwangempela kuba iphikisana noluntu kunye nokuziphatha komntu wokuziphatha.
Ukuziphatha nokuziphatha kweNtlalo:
Imilinganiselo iyimfuneko yokusebenzisana nentlalo kunye noluntu. Ukuba umntu oyedwa uhlala kwisiqithi esisekude, imigaqo yodwa "yokuziphatha" engayilandelwayo nayiphi na into ayimelwe yona; Kodwa kuya kuba yinto engacacanga ukuba uchaze iimfuno ezifana "nokuziphatha" kwindawo yokuqala. Ngaphandle kweyiphi na abantu abaza kusebenzisana nabo, akunakucinga ukucinga ngezinto zokuziphatha - nokuba kukho into enjengoThixo.
Ukuziphatha kunye nemilinganiselo:
Imilinganiselo isekelwe kwizinto esizixabisayo. Ngaphandle kokuba sixabise into ethile, akunakuqonda ukuba kukho imfuneko yokuziphatha esiyikhuselayo okanye yokuthintela ingozi ukuza kuyo. Ukuba ukhangele emuva kwimicimbi yokuziphatha eguqukile, uya kufumana inguqu enkulu kwizinto abantu abaxabisa ngazo. Abasetyhini basebenza ngaphandle kwekhaya batshintshe ukusuka ekuziphatheni okubi ngokokuziphatha; kwimvelaphi kwakukho utshintsho kwindlela abafazi abaxabiseke ngayo kwaye ngaba bafazi baxabisa njani ubomi babo.
Ukuziphatha koLuntu kwiiNtlalo zabantu:
Ukuba ukuziphatha ngokwenene kuyimisebenzi yolwalamano loluntu kwimimandla yoluntu kwaye isekelwe kwizinto abantu abaxabisekileyo, ngoko kulandela ukuba ukuziphatha ngokusemthethweni kuyimvelo kwendalo kunye nemvelaphi.
Nangona kukho unkulunkulu, lo thixo akasenasimo sokufumanisa iindlela ezona zilungileyo zokuqhuba ulwalamano lwabantu okanye, ngokubaluleke ngakumbi, yintoni abantu abafanele bayayixabise okanye bangayixabisi. Abantu bangathabatha ingcebiso kaThixo kwi-akhawunti, kodwa ekugqibeleni thina bantu sinomsebenzi wokwenza ukhetho lwethu.
Imilinganiselo yezenkolo njengesiQinisekile, isiko loThixo:
Uninzi lweenkcubeko zabantu lufumene ukuziphatha kwabo kwiinkonzo zabo; ngaphezu kwelo, nangona kunjalo, iinkcubeko zabantu zaqala ukuququzelela ukuziphatha kwabo kwiimfundiso zonqulo ukuze ziqinisekise ukuba ziphila ixesha elide kwaye ziwanike igunya elingakumbi ngokusesikweni. Ukuziphatha kwezenkolo ngoko ke akusiyo imilinganiselo ehleliweyo nguThixo, kodwa kunokuba iikhowudi zokuziphatha zakudala eziye zazingaphezu kwezinto ababhali babantu abaye bazixela-okanye mhlawumbi babezifunayo.
I-Secular, Imilinganiselo yokungahloneli uThixo kwiZizwe eziNinzi:
Kukho rhoqo ukuhluka phakathi kweempawu zokuziphatha ezithathwa ngabantu ngabanye kunye neempawu ezifunekayo kuluntu lonke, kodwa yiyiphi imilinganiselo yokuziphatha evumelekileyo ukunyanzelisa uluntu oluchazwe luninzi lwezenkolo?
Kuya kuba kukungalunganga ukukhupha naluphi na unqulo lwenkolo ukuphakamisa ngaphezu kwazo zonke ezinye iinkolo. Eyona nto sinokuyiphatha loo maxabiso awayefana nayo; Kungcono ukuba kusebenze izindinganiso zokuziphatha ezisekelwe kwisigqibo kunokuba ziphi na izibhalo kunye nezithethe.
Ukusungula ukuQongwa koMoya:
Kwakukho ixesha apho ezininzi iintlanga kunye noluntu lwabantu bebuhlanga, ngokobuhlanga, nangokwenkolo. Oku kwabenza baxhomekeke kwiimfundiso zenkcubeko kunye nezithethe xa bequlunqa imithetho yomntu kunye neemfuno zomntu. Abo bachasayo banokukhutshwa okanye balahlwe ngxaki encinane. Le yembali yembali kunye nomxholo wemilinganiselo yokuziphatha yenkolo abantu abazama ukuyisebenzisa njengesizathu semithetho karhulumente namhlanje; Ngelishwa kubo, iintlanga kunye noluntu ziya kutshintsha ngokuphawulekayo.
Okungakumbi, uluntu lwabantu luba buhlanga, ngokobuhlanga, nangokwenkolo. Akukho sisiseko esisodwa semigaqo yezenkolo kunye nezithethe ezenziwa ngabantu abangenakucingela ukuba baxhomekeke kwimithetho yoluntu okanye kwimigangatho. Oku akuthethi ukuba abantu abayi kuzama, kodwa oko kuthetha ukuba ekugqibeleni baya kuphumelela-nokuba iziphakamiso zabo aziyi kudlulayo, okanye ukuba iziphakamiso ziyaphumelela aziyi kufumana ukwamukelwa okwaneleyo ukuma.
Esikhundleni semilinganiselo yokuziphatha yendabuko, sifanele sithembele kwiimpawu ezingamhloneliyo uThixo , ezisekelwe kwizizathu zabantu, uvelwano lwabantu kunye namava abantu. Uluntu lwabantu lukhona ukuze luzuze abantu, kwaye kuyafana neenqobo zoluntu kunye nokuziphatha kwabantu.
Sidinga imilinganiselo yelizwe njengesizathu semithetho karhulumente kuba iinjongo ezingamhloneliyo uThixo kuphela, zizimeleyo kwiinkcubeko ezininzi zonqulo.
Oku akuthethi ukuba loo makholwa enkolo asebenza ngokubaluleka kweenkolelo zenkolo yangasese ayinanto yokunika iingxoxo zoluntu, kodwa ithetha ukuba abanako ukugxininisa ukuba ukuziphatha komntu kufuneka kuchazwe ngokwezinto ezizimeleyo zonqulo. Nantoni na ukuba bakholelwa ngokwabo, kufuneka baveze le miqathango yokuziphatha ngokubhekiselele kwisizathu sikarhulumente - ukucacisa ukuba kutheni ezo zixabiso zichanekile ngesiseko sabantu, amava kunye novelwano kunokuba bamkele imvelaphi kaThixo evela kwizinto ezithile ezichaziweyo okanye izibhalo .
County of Allegheny v. ACLU Greater Pittsburgh Isahluko (1989)
Yisiphi isilumkiso seBlack Red?
Amazwe angqonge uMlambo waseMississippi
Qala Ukufundisa Ekhaya
Rey Mysterio Iprofayili
Indlela Yokubhiyozela Ihlobo Elipheleleyo Lenyanga